Me Razafinjatovo Willy : “Aoka hatao ny fifidianana” | NewsMada
Me Razafinjatovo Willy : “Aoka hatao ny fifidianana”
Hanao ahoana ihany ny fanatanterahana ny fifidianana? “Aoka hatao”, hoy ny mpahay lalàna, ny Me Razafinjatovo Willy. Fanehoan-kevitra…
“Tsy te hiteny aho amin’izao fotoana izao hoe tsy maintsy atao an’izao na izatsy ny fifidianana. Efa ela no niainako sy nanarahako ny raharaham-pirenena, tsy tiako intsony isaky ny mandeha izao: misy ra latsaka hatrany, misy ra mandriaka. Aoka hatao tokoa ny fifidianana, fa amin’ny fomba tsara sy mahafa-po ny besinimaro.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, ny Me Razafinjatovo Willy, manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana izao amin’ny fiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika amin’ny 7 novambra. Efa tratra aoriana be raha izao vao hitady marimaritra iraisana.
“Inona no tokony ho marimaritra iraisana?” hoy izy. Hatao eo antenantenany eo ve: hahemotra kely sa haroso kely? Tsy mety avokoa izany rehetra izany. Ho an’ny sasany mbola mihenahena kosa hoe tsy maintsy hahemotra ny fifidianana: raha hatao izay, tsy maintsy hisy korontana, misy zavatra tsy mety. Tomponandraikitra koa izy ireo.
Tsy misy ny finiavana amin’ny fampiharana lalàna
“Misy ny lalàna, fa tsy misy ny finiavana amin’ny fampiharana azy avy amin’ny tomponandraikitra eto amintsika”, hoy ihany izy. Ny finiavana avy amin’ny olona no tsy misy. Mitodika amin’ny mpiray tanindrazana hifidy izy. Saingy alohan’ny hifidianana, mila eritreritina sy tsakotsakoina tsara izay hofidina.
Matoa mirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika ireo kandidà, tokony ho olom-banona ary azo ekena hoe misaina. Apetraka eo amin’ny fahendren-dry zareo izay hoe maha olona misaina azy izay: amin’izy mirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika izao, mety sa tsia izay eritreriny ary tsara sa tsia? Hahasoa ireo Malagasy mpiray tanindrazana amin’ny tena sy ny tanindrazana ho amin’ny fampandrosoana ve izany?